विषादीको परीक्षण, बढ्दो प्रयोग र न्यूनीकरण – Chitwan Post
प्रकाशित मिति: सोमवार, असार ३०, २०७६
सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी असार २ गतेदेखि सीमा नाकाबाट अनिवार्यरुपमा विषादी परीक्षण गरेर मात्र फलफूल तथा तरकारीजन्य वस्तु नेपाल भिœयाउने सरकारी निर्णय दुई साता पनि टिकेन । कूटनीतिक दबाबका कारण विभिन्न नाकाबाट विषादी परीक्षण नगरी नछाड्ने अडानबाट सरकार हटेपछि सरकारी कदमलाई ताली दिइरहेका जनता पुनः गालीमा उत्रेका छन् । विषादी परीक्षण नगरी भारतबाट तरकारी तथा फलफूल नभिœयाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश पनि दिएको छ ।
हिजोको दिनमा नेपाली कृषि उपज भारत तथा तेस्रो मुलुक पठाउँदा प्रयोगशाला परीक्षणका नाममा हप्तौँसम्म सीमामा वस्तु राखिँदा कुहिएर फालिएका उदाहरण पनि छन् । भारतीय पक्षले सीमा नाकामा क्वारेन्टाइन प्रयोगशाला नभएका कारण नेपाली व्यापारीले दुःख पाएको विषयमा सरकारले पहल गरेको पनि हो । त्यसैले, भारत सरकारले पनि नेपालको थप सीमा नाकामा प्रयोगशाला राख्नमा सहमत भएको पनि छ ।
विषादी परीक्षण राजनीतिक विषय हो कि मानवअधिकारको विषय ? परीक्षण, नियमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको कुन निकायको हो र सो निकाय स्रोतसाधनयुक्त छ वा छैन ? सरकार दबाबमा परेको हो भने नेपालीको स्वास्थ्यबारे छिमेकी मुलुकलाई वास्ता नहुने हो त ? भन्ने प्रश्न पनि भारतमाथि तेर्सिन्छ । दुई देशबीचको व्यापारलाई चुस्तदुरूस्त बनाउन नेपाल–भारत दुवै सरकार संयमित हुनु जरूरी छ । तर, नेपाली जनतामा पनि उत्तिकै संयमता आवश्यक देखिन्छ । किनकि, हिजो भारतले दुःख दियो भन्दैमा आज भारतीय व्यापारमा समस्या आउँदा खुच्चिङ भन्नुमात्र नागरिकको कर्तव्य हैन । साथै, नेपालप्रतिको हेपाहा प्रवृत्तिलाई पखाल्न भारतीय उदारता पनि उत्तिकै खाँचो छ । किनकि, नाकाबन्दीपछि नेपाली जनतामा विकास भएको भारतविरोधी सोच सेलाउँदै गर्दा आउने दिनमा दुई देशका जनतामा चिसोपन आउन सक्छ ।
आयात–निर्यातको विषय दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्धमात्र नभएर मानवअधिकारको विषय हो । त्यसैले, सीमा नाकामा आफ्ना नागरिकले खाने कस्ता वस्तु भित्रँदैछन् भन्ने चेकजाँच गर्ने अधिकार जुनकुनै मुलुकलाई हुन्छ । तर, यसका लागि सरकारले आफ्ना निकायबीच समन्वय गर्न सक्नुपर्छ, आवश्यक मापदण्ड तथा संरचना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा आयात–निर्यातका लागि एकीकृत निकाय र एकीकृत प्रयोगशालासहितको संयन्त्र सीमा नाकामा तैनाथ गर्न सरकारले ढिला गर्नुहुन्न । अहिले पनि छन्, तर छरिएका निकायलाई एकीकृत गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार चेकजाँचको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सीमा नाकाबाट भित्रने वस्तु नियमन गर्ने सरकारी निकाय नै आधा दर्जन छन् । पहिलेको संरचनाअनुसार हेर्ने हो भने बिरूवाजन्य वस्तुको चेकजाँच गर्ने निकाय कृषि विभागअन्तर्गतको प्लान्ट क्वारेन्टाइनको क्षेत्राधिकार हो । पशुजन्य हो भने पशुसेवा विभागको क्वारेन्टाइनले हेर्छ भने अन्य खाद्य पदार्थ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको क्षेत्राधिकार हो । वन, वाणिज्य, वातावरणदेखि नापतौल विभागसम्मको क्षेत्राधिकार आपसमा बाझिने गरेका छन् । उता, भन्सार विभाग आयात–निर्यात आफ्नो मात्र क्षेत्राधिकार भनेर समय–समयमा अरु निकायलाई नटेरेर आफैँले मात्र भित्रने अनुमति दिने गरेको अभ्यास पनि विगतमा देखिएको हो ।
कृषि क्षेत्रमा रासायनिक विषादीको अत्यधिक प्रयोग यतिबेला नेपालमा मात्र नभई विश्वभरि नै चिन्ता र सरोकारको विषय बनेको छ । नेपालमा यस आर्थिक वर्षमा मात्र ६ सय मेट्रिक टन विषादी आयात भएको छ, जुन करिब ७५ करोड रूपैयाँबराबरको हो । नेपाल आयात हुने विषादीमध्ये ८५ प्रतिशत विषादी तरकारीमा प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ ।
कृषि क्षेत्र आफैँमा गन्जागोल अवस्थामा छ । यतिबेला बजारमा आएका कुनै कृषि उत्पादन छैन होला, जसमा विषादी प्रयोग नगरिएको होस् । विगत दुई दशकदेखि विशेषगरी तरकारीमा विषादीको प्रयोग बढेकै छ, सँगै अन्य खाद्यान्नहरुमा पनि विषादी हाल्ने क्रम रोकिएको छैन । यसले मानव स्वास्थ्यका लागिमात्र हानि गरेको छैन, ठूलो मात्रामा आर्थिक क्षति पनि गराएको छ । वातावरण प्रदूषणको मुख्य कारक त¤वका रुपमा त यो रहेकै छ, तैपनि पछिल्ला दिनहरुमा यसको प्रयोगमा न्यूनीकरण आउन सकेको छैन । न वैकल्पिक व्यवस्था नै हुन सकेको छ, जसका कारण आज किसानको खेतदेखि सर्वसाधारणको भान्सासम्म नै विषादीको प्रवेश भएको छ ।
अध्ययनअनुसार तरकारीमा १.६ किलोग्राम विषादी प्रतिहेक्टरमा प्रयोग भइरहेको छ, जुन धेरै परिमाण हो । यद्यपि, तरकारीमा किन धेरै परिमाणमा विषादी प्रयोग भयो भन्ने कुरा बुझ्न जरूरी छ । कृषिमा सबैभन्दा बढी व्यावसायिक भएको क्षेत्र तरकारी हो । जुन बालीमा व्यावसायीकरण हुन्छ त्यसमा कृषकले आफ्नो बाली जोगाउन विषादी प्रयोग गर्छ । किनभने, व्यावसायीकरणका माध्यमबाट गरेको खेतीमा नाफा कमाउने उद्देश्य राखिन्छ । नाफाका लागि बाली संरक्षण गर्न किसानले विषादी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । किसानले आफ्नो बाली संरक्षण गर्न विषादीको प्रयोग गर्नु जायज हो, तर कति मात्रामा प्रयोग गरेको छ, कुन विषादी प्रयोग गरेको छ भन्ने कुराचाहिँ बुझ्नुपर्छ । विषादी कुन बेला प्रयोग गर्नुपर्छ, विषादी छरेको कति समयमा बाली टिप्ने गरेको छ भन्ने कुरा किसानले राम्ररी बुझ्नुपर्छ । हामीले यही विषयलाई सचेतरुपमा प्रसार गर्नु जरूरी छ । अहिले विषादी प्रयोगका बारेमा धेरै सुधार भएको पाइन्छ ।
परम्परागत कृषिप्रणालीले बढ्दो जनसंख्यालाई नपुग्ने भएकाले कृषकहरु कृषिमा नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न बाध्य छन् । नयाँ प्रविधिलाई नयाँ बीउबिजन र रासायनिक मलको प्रयोग पनि धेरै नै गर्नुपर्ने हुन्छ । हाइब्रिड जातका कृषि उत्पादनहरुले वातावरणको परिवर्तनलाई सहजै पचाउन सक्दैनन् । त्यसपछि विभिन्न प्रकारका कीरा–फट्यांग्राको प्रकोपले बालीनाली नै सखाप हुनेसम्मको अवस्था आउने गरेको हामीले देखेसुनेकै कुरा हो । यस्ता समस्या आएपछि कृषकहरुले विषादीको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । हुन त, प्राकृतिक तरिकाले पनि कीटाणुको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, तर किसानहरुले छिट्टै उत्पादन लिन सकिने होडबाजीले गर्दा विषादी प्रयोग बढाउँदै लगेको पाइएको छ ।
एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्र्काितर विषादी प्रयोगले वातावरणलाई नै दीर्घकालीन प्रभाव पनि पार्छ । मानिसलाई लाग्ने दीर्घरोगहरु क्यान्सर, मधुमेह, श्वासप्रश्वास, मिर्गौला फेललगायतको मुख्य कारण पनि विषादीको प्रयोग बढ्दो भएरै हो । विषादीको कारोबारमा संलग्न व्यक्ति, कृषकहरु तथा कृषि उपज उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरु सबैलाई नराम्रो प्रभाव पारिरहेको छ । महिला र केटाकेटीहरुमा यसको प्रभाव बढी छ । विषादीका कारणले तत्काल असरका रुपमा मानवमा मूच्र्छा पर्ने, झाडापखाला, कम्पन, दृष्टि कमजोर तथा मृत्युसम्म हुने गरेको छ भने दीर्घकालीन असरमा अन्धोपना, क्यान्सर, ट्युमर, नपुंसकता, बाँझोपन, विकृत बच्चाको जन्म, शरीरका विभिन्न अंगहरुमा असर, नसासम्बन्धी समस्या जस्तैः पक्षघातजस्ता समस्या ल्याउने गर्दछ ।
विषादीले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा पार्ने असर भयावह छ । विषादीको संसर्गमा आएपछि तत्काल छालामा एलर्जी हुने, आँखा पोल्ने, रिंगटा लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, शरीर शिथिल हुनेजस्ता समस्या देखिन्छन् । विषादी विभिन्न माध्यमबाट शरीरभित्र प्रवेश गर्दछ, जस्तैः छालाबाट, आँखाबाट, श्वास फेर्दा र विषादी प्रयोग भएको वा विषादीको अवशेष बाँकी रहेका खानेकुरा खाएमा । कतिपय विषादीले आमाको गर्भ र दूधबाट पनि बच्चाको शारीरिक र मानसिक विकासलाई असर गर्छ । यसरी लामो समयसम्म विषादीको संसर्गमा आएपछि विभिन्न किसिमका क्यान्सर हुने सम्भावना बढ्ने अध्ययनहरुले प्रमाणित गरिसकेका छन् । विषादीकै कारणले गर्दा प्रजनन क्षमतामा समेत ह्रास आउने, सुस्त मनःस्थिति र अंगभंग भएका बच्चा जन्मने हुन्छन् ।
विषादी आफैँमा समस्या होइन, समस्या त यसको व्यवस्थापन र प्रयोग गर्न नजानेरै भएको हो । अहिले पनि विषादी प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउने गरिएको पाइँदैन । सामान्य मास्क, पञ्जा पनि नलगाई यसको प्रयोग गर्ने किसानको संख्या धेरै छ, जसले गर्दा आँखाको रोग, छालाको रोग, फोक्सोको रोग, क्यान्सरलगायतका समस्या उनीहरुमा देखिएको छ । एकातिर यस्तो छ भने अर्र्काितर कुन विषादी केमा प्रयोग गर्ने भन्ने पनि ज्ञान नभएका कारण किसानहरुले यसको प्रयोग जथाभावी गर्ने गरेका छन् । सरकारले पहिले त किसानलाई सचेत गराउनु जरूरी छ । यसका साथै बर्र्सेिन अर्बौं रूपैयाँ विषादी खरिदका लागि खर्च गरिएको छ ।
यसलाई रोक्दै प्राकृतिकरुपमा कसरी कीटाणु नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर किसानलाई ज्ञान दिलाउन सके यसको प्रयोग पक्कै पनि घट्छ । किसान सचेत पनि हुन्छन् । किसानलाई पनि यसरी विषादी प्रयोग गर्न र यसका लागि थुप्रै पैसा खर्च गर्न पक्कै पनि रहर त छैन होला । अर्र्काितर स्वयं किसानले पनि यसतर्फ सचेत बन्न जरूरी छ । कृषि उत्पादनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर विषादी प्रयोग गर्नाले कालान्तरमा आफैँलाई हानि पुग्ने रहेछ भनेर बुझ्न जरूरी छ । यसो गर्न सकियो भने विषादीबाट हुने हानि पक्कै रोक्न सकिन्छ । वातावरण प्रदूषण हुने खतरा पनि कम हुन्छ । यसकै लागि बर्र्सेिन बाहिरिने अर्बौं रूपैयाँ पनि बचत हुन्छ । एक जनाले मात्र रोक्न खोजेर सकिँदैन, सबैको साथ र सहयोग भयो भने असम्भव पनि केही छैन । अब यतातिर सोच्नु जरूरी छ ।
प्रयोग भएका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विषादीहरु लक्षित समस्या समाधान गर्नभन्दा मानव, वन्यजन्तु, पानीको स्रोत, माटो तथा हावामा समाविष्ट भइरहेको छ, जसले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा विभिन्न समस्याहरु जन्माएको छ । मौरीको संख्यामा कमी ल्याउन खेतबारीमा प्रयोग गरिएका विषादीहरु प्रमुख कारक रहेको प्रमाणित भइसकेको छ, जसका कारण बाली बिरूवामा हुने परागसेँचन प्रक्रियामा कमी आएर कृषि उत्पादनमा कमी हुन्छ । विषादीको व्यापक प्रयोगले विषादीका अवशेष माटो तथा पानीमा बढेर गएको छ । ओजन तहको विनासमा विषादीको भार ६ प्रतिशत रहेको तथ्यांकहरुले देखाएका छन् ।
तरकारीमा प्रयोग हुने एक प्रतिशत विषादीले कीरा मार्छ । बाँकी ९९ प्रतिशत मान्छेको शरीरदेखि वातावरणमा घुलमिल हुन्छ । विषादी जसले छर्छ उसलाई अरुभन्दा चार गुना बढी असर गर्छ । दीर्घरोगका बिरामी बढाउँछ, तर हामीले त्यतातिर खासै ध्यान पु¥याउन सकेका छैनौँ । यसले गर्दा विषादी प्रयोग आज भीमकाय समस्याका रुपमा रहेको छ । सरकारले पटकपटक अर्र्गािनक खेतीमा जोड दिने र किसानहरुमा बढिरहेको विषादी मोहलाई निरूत्साहित गर्ने नीति अघि सारेको निकै वर्ष भइसक्यो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भने फलामको चिउरा चपाउनुजत्तिकै भएको छ । न यसको आयात घटेको छ, न किसानहरुले प्रयोग नै घटाएका छन् । तैपनि, बर्र्सेिन नारा भने निकै मीठा लगाएको सरकारले हालैमात्र एउटा निर्णय गरेको छ । निर्णयअनुसार नेपालमा प्रतिबन्धित २१ प्रकारको विषादीको आयात र प्रयोग गर्न नपाउने बताइएको छ । अबदेखि यस्ता विषादीको बिक्रीवितरण गर्ने व्यक्ति ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजायको भागीदार हुनेछन् ।
रासायनिक विषादी न्यूनीकरण अभियानमा उपभोक्ताहरुको विशेष र अहम् भूमिका हुन्छ । उपभोक्ताको छनोट विधिले समग्र बजारमा कस्तो कृषि उपजले प्राथमिकता पाउने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्छ र यसले अप्रत्यक्षरुपमा कृषकले कस्तो उत्पादन गर्ने भन्ने विषयलाई पनि निर्र्देिशत गर्छ । अर्थात्, उपभोक्ताले पनि रासायनिक विषादी प्रयोग भए÷नभएको तरकारी, फलफूल छनोट गर्न सिक्नुपर्छ । कृषि बजारमा प्रांगारिक र विषादीरहित उत्पादनको माग बढेमा मात्र रासायनिक विषादी प्रयोगलाई निरूत्साहित गर्न सकिन्छ । हामीले दैनिकरुपमा उपभोग गर्ने तरकारी, फलफूल विषादीयुक्त हुनु साह्रै दुःखद विषय हो । विषादीसँग सम्बन्धित प्राविधिक पक्षहरु कृषि क्षेत्रले सम्बोधन गर्नुपर्छ, तर यसको प्रभाव प्रत्यक्षरुपमा स्वास्थ्यमा पर्ने भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रले पनि यस मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ । यसमा अवश्य पनि राजनीतिक अठोटको भूमिका वाञ्छनीय हुन्छ ।